Malunga nathi-Hebei Shouzheng Technology Co, Ltd.
UHebei Shouzheng Technology Co, Ltd ngumnakekeli wezempilo oqeqeshiweyo kunye nesixhobo sonyango, umthengisi wonke kunye nomthengisi wezinto zangaphandle, oSixekweni seShijiazhuang, kwiPhondo laseHebei.
Sifumene i-FDA, i-CE, izatifikethi ze-ISO, isiqinisekiso somgangatho ophezulu wemveliso. Iqela lethu elinobuchule bokuvelisa, iqela lokuthengisa elinobuchule, iqela elilawulayo lomgangatho ongqongqo kunye nabaqulunqi beetalente abanokukunika iinkonzo ezingakhathazeki.
Simema ngokunyanisekileyo abathengi e China nase Abroad ukuba bakhulise ukhathalelo lwempilo kunye neshishini lezonyango kwaye basebenze ngolindelo olukhulu kunye. Ukujonga phambili ekusebenzeni nawe ixesha elide!